Ismaamulkii Amxarada oo isku shaandhayn lagu sameeyay intii badnaydna lacaydhiyay. | ogaden24
Ismaamulkii Amxarada oo isku shaandhayn lagu sameeyay intii badnaydna lacaydhiyay.
Nov 24, 2016 - Aragtiyood
Kadib shirar Qiimayna oo magaalada Bahardar si Gaabis ah uga socday ayaa ugu dambays waxaa maalinkii shalay ahaa lagaga dhawaaqay in isku shaandhayn mug leh lagu sameeyay Golihii xukuumada is maamulka Amxarada.
Shirarka Qiimaynta ah ee kadhex socday kooxda ANDM ee is maamulka Amxarada Taladiisa haysa oo qaab awood ku loolan ah isu badalay ayaa marar badan lagu kala kacay, balse is Jiid jiid badan kadib waxaa meesha laga saaray xubno mudo dheer kusoo jiray Hogaaminta maamulka Amxarada.
Madaxa maamulka Amxarada Gedu Andargachew ayaa shaaciyay magacyada 22-xubnood oo noqonaya xubnaha cusub ee Golaha wasiirada maamulkaasi, waxaana cusub 16-xubnood halka ay kooxdii hore kasoo hadheen 7-xubnood oo uu kujiro madaxa maamulka Amxarada oo isugu dagaal adag lagalay kooxda Gudomiyaha oo doonaysay inay Kar-kaarka waydaariyaan.
Isku shaandhayntani ayaa kutimid cadaadis xoogan oo Ururku kala kulmay kooxda talada dalka Itobiya haysata ee TPLF, taasi oo si Joogta ah ugu eedaynaysay inay Ururka Taladiisii lawareegeen waxay ugu yeedheen Hadhaagii Dergiga oo doonaya inay mar kale Talada dalka Gacanta kudhigaan.
Dhinaca kale waxaa xabsiga loo taxaabay saraakiil katirsan ciidanka Booliiska iyo kuwa milateriga oo ay Galaafatay Qiimayn Garab socotay tan Ururka ANDM oo iyana kasocotay isla magaalada Bahardar ee xarunta maamulka Amxarada.
Eedaha ugu badan ee siyaasiyiinta iyo saraakiisha Amxaradu wajahayaan ayaa ah inay xidhiidh laleeyihiin mucaaradka Hubaysan ee Axmarada oo Woyanuhu u yaqaanaan Hadhaagii Dergiga, waxaan se la Ogayn sida ay isku shaandhayntani wax uga tari doonto kacdoonka Hubaysan ee Qomiyada Amxaradu kala Horjeedo Jabhada TPLF.